Kedu ihe bụ mmetụta Coanda na gịnị bụ mkpa ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Aerodynamics nke oge a na-arụ ọrụ na otu n'ime isi mmetụta dị mkpa maka ụgbọ elu iji fee. A maara mmetụta a dị ka Coanda mmetụta. Mmetụta Coanda bụ ihe siri ike ịkọwa mana ọ ghọrọ ihe dị oke mkpa n'ụzọ nke na ọ bụrụla ntọala nke mmepe ụgbọ ala.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe mmetụta Coanda bụ na mkpa ọ dị.
1 Kedu ihe mmetụta Coanda
2 Nyocha iji gosipụta mmetụta Coanda
3 Uru na mkpa
4 Njirimara na ọchịchọ ịmata ihe
Kedu ihe mmetụta Coanda
Iji kọwaa ihe mmetụta a bụ, ị ga-eche n'echiche kandụl na-ere ọkụ. Ọ bụrụ na anyị agbanyụ mma a site n'ịfụ ya, ọ ga-abụ ihe ozugbo. Ọ bụrụ na anyị eme otu mmega ahụ mana tinye igbe dị nha n'etiti anyị na kandụl ahụ. Ihe kachasị dị mma bụ iche na ọ bụ ma na-afụ anyị, ikuku ga-agbasasị n'akụkụ abụọ ọ gaghị akụ ụgbọ mmiri ahụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị ejiri karama mmanya dochie igbe, ihe ga-esi na ya pụta agaghị abụ otu. Mgbagha na-eduga anyị na-eche na ikuku ga-agbasakwa n'akụkụ abụọ ma ọ gaghị enwe ike ịkwụ ụgwọ kandụl ahụ.
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe ijuanya, kandụl ahụ nwere ike ịnwụ n'ihi ekele Coanda. Ma nke ahụ bụ Mmetụta Coanda na-akọwa ntụgharị nke mmiri mmiri mgbe ọ metụtara ahụ siri ike. Fluids nweta mgbanwe na mmegharị na mwepu mgbe ha jikọtara ya na anụ ahụ siri ike.
Enwere ike ịsị na mmetụta Coanda bụ usoro ihe omume nwere ike ịkọwa akwara nke mmiri mgbe ọ metụtara elu. A na-eji ya dị ka ụkpụrụ na mmiri niile na-adọta mmasị n'ebe dị nso kama ịba ụba ma ọ bụ ịkpafu. Nke a bụ ihe megidere nke siri ike. Ọ bụrụ na ihe siri ike na-adakọ na onye ọzọ siri ike, ihe kachasị dị mma bụ na ọ ga-agbagha ma wezuga ụzọ ya. Otú ọ dị, n’ihe banyere mmiri mmiri, ọ bụ n’elu mmiri ka o wetara m.
Nyocha iji gosipụta mmetụta Coanda
Ọ bụrụ na anyị emee nnwale ahụ dị n'elu, anyị nwere ike ịhụ na ikuku na-agbaso ụzọ gbara agba nke kalama ahụ kama ịda n'akụkụ. Ọ bụrụ na anyị atụba bọọlụ tenis megide karama mmanya, anyị na-ahụ na a ga-agbanwe trajectị nke bọọlụ ahụ, mana ọ gaghị adị ka contour nke kalama ahụ. Nke a na-enyere anyị aka wepụ ozi ndị dị mkpa mara na mmiri mmiri ga-esochi ụzọ gbara ọkpụrụkpụ.
N'okwu dị mfe, viscosity nke mkpọtụ bụ ihe kachasị mkpa maka mmetụta Coanda ga-eme. Mgbe mmiri nke mbụ na-emetụta ahụ nwere ezigbo contour dị larịị, viscosity nke mmiri ahụ bụ ihe na-eme ka akụkụ ahụ ghara ịrapara na elu nke siri ike. Nke a bụ otu esi emepụta otu edo na mpempe akwụkwọ yiri ahụ nke siri ike. Mmadu puru iji udiri udiri a meputa udiri mpempe aru di ka agwo plasticine.
Ihe niile dị na mmiri, na nke a ikuku, ha mechara na-emetụta ahụ ha ma na-emepụta ọkwa ọhụrụ dịka nke mbụ. Nke a bụ otu esi ewepụta ụzọ n'ụzọ dị mmiri mmiri.
Uru na mkpa
E gosipụtawo mmetụta Coanda ma jiri ya kwa ụbọchị n'ụgbọ elu na ịgba ọsọ. Ikwesiri imata na, iji bulie ihe ndi ozo ugbo ala, ighaghi ima ihe ikuku na ikuku. Ọ bụrụ na anyị maara na ụmụ irighiri mmiri na-arapara n’elu ala, anyị nwere ike ịhazi ụdị ikuku dị mma karịa. Otu ihe atụ nke ihe Coanda na-ejikarị eme ihe bụ Formula 1. single-seaters. Mpaghara nwere akụkụ ponton, jiri ohere Coanda mee ka ikuku dị ukwuu gaa n'akụkụ ụfọdụ dịka ala dị larịị, ndị na-ekesa ya na nsogbu. . Ihe ndị a niile nke ụgbọ ala na-emetụta njide ma ọ bụ oke ọsọ.
Nke a na - eme ka mmetụta Coanda bụrụ otu n’ime ogidi dị mkpa na moto na ụgbọelu. Otu ihe ahụ maka ụgbọ elu. Na nku, ụzọ nke ikuku na-enweta ntakịrị ngọngọ nke na-enyere aka ịmepụta ike nke na-enyere aka ijide ụgbọelu na ikuku. Ikuku gbagọrọ agbagọ, yana nkụda mmụọ, yana iwu nke atọ nke Newton anyị maara ikike niile na-eme na nku nke ụgbọ elu ahụ.
Site na mmetụta Coanda, enwere ike idozi ya na ntụzi ọ bụla ọzọ ka ọ kwe ka ndị injinia chepụta ụzọ iji rụọ ọrụ nke ọma. Mmetụta a nke mmetụta Coanda na aerodynamics nke ụgbọ ọ bụ ihe dị mkpa n'ịrụ ụgbọ ala dị nchebe na ngwa ngwa. Na mgbakwunye, atụmatụ ikuku ndị a na-enyere aka ịchekwa ọtụtụ mmanụ, ebe ha na-enyere aka belata ike esemokwu na ikuku.
Njirimara na ọchịchọ ịmata ihe
Ihe Coanda nwere bu ihe echeputara na ihe di gburugburu ihe. Ọ bụrụ na anyị enyochaa ike niile na ikuku ikuku nke ikuku na-agba ọsọ ọsọ, a na-ahụta ikuku ọ bụghị naanị mmiri mmiri, kama ọ bụ mmiri na-enweghị atụ. Ikuku ahụ bụ mmiri na-enweghị ike ịkọwapụta pụtara na olu nke ikuku ikuku ga-adị mgbe niile n'oge. Anyi aghaghi ima kwa na ikuku anaghi agbawapu ibe ya ka ogwe adighi, nke ana akpo voids.
E nwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-agọnahụ na mmetụta Coanda na-eme na mmiri. A na - ekwu na ndapụ a si n'ụzọ mmiri mgbe ọ na - adaba na ihu nke anụ ahụ siri ike bụ n'ihi esemokwu elu. Ya mere, enwere ike ịsị na anaghị etinye ntụpọ Coanda n'ụdị mmiri mmiri niile, ebe ọ bụ na a ga-eburukwa njupụta na viscosity nke otu. Anyị maara na ikuku nwere obere viscosity, ya mere mmetụta Coanda na-eme n'ụzọ siri ike karị.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mmetụta Coanda na mkpa ọ dị na ụgbọ elu na ịgba ọsọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Coanda mmetụta